सरकारले कि पैसा दिओस् कि अनुमति, हैन भने पीडित सहेर बस्दैनन् — बहसमा भूकम्प पीडित संस्था
| 2016-03-30 Published
निर्माण सञ्चार, निर्माण बहस ।
भूकम्प गएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा समेत पीडितहरुका घर बन्न सकेका छैनन् । वैशाख १२ को भूकम्पले पीडितहरुलाई घरबार विहीन बनायो, आफन्त मार्यो र सम्पत्ति समेत सकियो । पीडितलाई त्यतिले मात्र पीडा थपेन, लगतै वर्षायामको बाढी, पहिरोले दुःख दियो भने भारतको नाकाबन्दीले त देशलाई पीडितको पक्षमा काम गर्न नसक्ने ठाउँमा पुर्यायो । त्यसपछि सुरु भयो हिउँद । चिसो, सिरेटो र हिमपातले पीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिन मात्र कति दुई दर्जन बढीको त ज्यान नै लियो । अहिले चैते हुरीले पीडितका अस्थायी पालहरु उडाएको छ । तर, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लागि पहिले त पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन नै भएन, गठनपछि पनि प्राधिकरणले कामै गरेन । प्राधिकरणको लफडाले पीडितहरु झनै मर्कामा छन् । गाविस सचिवदेखि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुमा हुर्किएको असहयोगी चरित्र उदाङ्गो हुँदा विश्व नै चकित छ । प्राधिकरणले ठाडो आदेश गरेर घर नबनाउन भनेको छ । न घर बनाउन दिन्छ, पीडितलाई रकम नै दिन्छ । यस्तो अवस्थामा भूकम्प पीडित राष्ट्रिय मञ्च र महासंघ जस्ता पीडितका पक्षमा काम गर्ने भनिएका संस्था खुलेका छन्, यिनीहरुको शिथिलता र कार्यशैली हेर्दा भूतले खाजा खाने बेलामा जन्मिएका ख्याउटे सन्तान सरह बनेका छन् । किन जन्माइन्छ संस्था काम नगर्ने हो भने भनी सोधिएको प्रश्नमा भूकम्प पीडित राष्ट्रिय मञ्च र महासंघका अध्यक्षले दिएको जवाफ जस्ताको तस्तै:
० पीडितका नाममा खोलिएको मञ्च र महासंघले के गर्दैछन् ?
हस्त पण्डित— केही गर्न सकिएन र गरेको पनि छैन । किनकि पीडितहरुको पक्षमा काम गर्ने वातावरण सरकारले नै विथोलेको छ । घर नबनाउन भनेको छ, न त पैसा दिन्छ, न घर बनाउन अनुमति नै दिन्छ ।
अच्यूत खनाल— भूकम्प पीडितका पक्षमा काम गर्नका लागि महासंघ बनाएको हो । सुते जतिको भयो, केही गर्न सकिएन ।
० गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिले पीडितलाई न्याय दिन्छ त ?
हस्त पण्डित— हामी आफैं पीडित नै छौं, पीडित नै हौं । गर्न नसकेको भनौं भने स्थानीय ठाउँहरुमा पीडितहरुका हितमा सकेको काम गरेका छौं । तर, यतिका दिनसम्म जुन ठोस काम हुनुपर्ने हो, देखिने र छोइने काम सरोकारवाला पक्षबाट नभएपछि हामी पनि लज्जित छौं ।
अच्यूत खनाल— न्याय त दिँदैन । गर्न नसकेको नेताबोध पनि छ । तैपनि हामीले कामै नगरेको त होइन । सरकारलाई तीन पटकसम्म ज्ञापनपत्र दियौं । माग राख्यौं । पीडितहरुको घर तुरुन्तै बनोस् भनेर विभिन्न तहमा भेटघाट पनि गर्यौं । तर, काम नभएपछि अब संघर्ष गर्नुपर्छ भनी लागिरहेको छ ।
० के गर्ने तयारी छ त ?
हस्त पण्डित— सरकारले यही चालले भूकम्प पीडितलाई बेवास्ता गरिरहन्छ भने संघर्षको तयारी गर्नुपर्छ । उसले केही नदिएपनि, घर नबनाऊ भनेपनि वर्षा सुरु हुन लाग्यो । अब गाउँका स्थानीय पीडितहरु आफ्नो घर आफैं बनाउन थाल्ने छन् । सरकारको मुख ताकेर बस्दा बिचल्लीमात्र भएको छ ।
अच्यूत खनाल— अबको विकल्प भनेको संघर्षमात्रै हो । भूकम्प पीडितको दोस्रो बाटो नै छैन । केही व्यक्तिले त घर बनाउन सक्लान् तर, अधिकांश भूकम्प पीडितहरुका घर, सम्पत्ति केही बाँकी छैन । आखिर सर्वहाराले कि त मर्नुपर्छ, कि त संघर्ष ।
(सिन्धुपाल्चोकका हस्त पण्डित राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवा समेत हुन् भने उनी भूकम्प पीडित राष्ट्रिय मञ्च नेपालका अध्यक्ष पनि हुन् । ललितपुरबासी अच्यूत खनाल भूकम्प पीडित महासंघ नेपालका महासचिव हुन् ।)